Waaheen Media Group » Ururka Daacish oo Mar kale la Wareegay Deegaano Hoos Taga Puntland
Browse:Home Videos Ururka Daacish oo Mar kale la Wareegay Deegaano Hoos Taga Puntland
Ururka Daacish oo Mar kale la Wareegay Deegaano Hoos Taga Puntland
Published by Waaheen Media on April 18, 2017 | Comments Off on Ururka Daacish oo Mar kale la Wareegay Deegaano Hoos Taga Puntland
Ciidamada Puntland ayaa isaga baxay deegaankaas, waxaana markiiba la wareegay Kooxda Daacish
Hargeysa(Waaheen) Ururka Daacish ayaa mar kale gacanta ku dhigtay deegaan ka mid ah deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Puntland kadib markii bilooyin ka hor laga saaray Degmada Qandalla. Haddaba wararkii ugu dambeeyey oo ay Waaheen ka heleyso Gobolka Bari gaar ahaan Degmada Qandala ayaa sheegaya inay ciidamada ka tirsan Kooxda Daacish ay gacanta ku dhigeyn deegaanka Saan oo hoos tagta degmada Qandala kadib markii ay isaga baxeen Ciidamadii Puntland ee halkaas ku sugnaa. Ciidamada Puntland ayaa isaga baxay deegaankaas, iyadoo aan si rasmi ah loo ogeyn sababta ka dambeyso inay halkaas faaruqiyaan, waxayna arrintaasi keentay inay Ciidamda Daacish si dagaal la’aan ay kula wareegaan halkaas. Maamulka Puntland weli wax jawaab ah kama bixin arrintaan kasoo cusboonaatay Degmada Qandalla, maadaama dhawr bil ka hor ay ciidamada Puntland dagaal culus halkaas kula galeyn dagaalyahanada Daacish. Ciidamada Daacish ayaa muddo 2 Bil ah ku sugnaa Degmada Qandalla, waxayna ugu dambeyn dagaal culus kala kulmeyn ciidamada sida gaarka ah u tababar ee Puntland. Ururka Daacish ayaa shaacisay inay howlgalo ka wado gudaha Soomaaliya, waxayna la wareegtay qeyb ka tirsan Ciidamadii Al-Shabaab, kuwaas oo kusoo biiray ururka Daacishta Soomaaliya.